Ebee ka akụkụ kacha mma nke Ụzọ okirikiri Danube dị? > Site n'ịnyịnya igwe
↓ Mafee na isi ọdịnaya
Site na anyịnya igwe
Ugbu a Danube Cycle Path
Nchịkọta nke nkebi
Nkeji 5 Melk - Krems
Kedu ihe bụ Wachau?
Mmiri n'ụzọ Danube Cycle Path na Wachau
Apricot na-eto na Wachau
Nbibi ụlọ n'azụ
iru ebe ahụ
Kedu ihe bụ Danube Cycle Path?
Danube bụ osimiri nke abụọ kacha ogologo na Europe. Ọ na-ebili na Germany wee banye n'Oké Osimiri Ojii.
Enwere ụzọ okirikiri n'akụkụ Danube, ụzọ okirikiri Danube.
Mgbe anyị na-ekwu maka ụzọ Danube Cycle Path, anyị na-ekwukarị ụzọ kacha esi esi Passau gaa Vienna. Akụkụ kachasị mma nke ụzọ okirikiri a n'akụkụ Danube dị na Wachau. A maara ngalaba sitere na Spitz ruo Weissenkirchen dị ka obi nke Wachau.
A na-ekewa njem site na Passau ruo Vienna n'ime usoro 7, nkezi nke 50 km kwa ụbọchị.
Mma nke Danube Cycle Path
Ịgba ígwè n'ụzọ Danube Cycle Path dị mma.
Ọ dị mma nke ukwuu ịnya igwe kwụ otu ebe n'akụkụ osimiri na-asọ n'efu, dịka ọmụmaatụ na Wachau nke dị n'akụkụ ndịda Danube site na Aggsbach-Dorf ruo Bacharnsdorf, ma ọ bụ site na Au si Schönbühel ruo Aggsbach-Dorf.
na 7 ụbọchị Passau Vienna
Na ụzọ na Danube Cycle Path
Kedu ihe bụ Heuriger?
Ịgba ígwè na-adịghị mma (ndị na-agba ígwè na-ebi ndụ dị ize ndụ)